Yakajeka gwara rekumhanyisa rako reWordPress peji | Linux Vakapindwa muropa
Yakajeka gwara rekumhanyisa rako reWordPress peji
Paunenge uchinge uine yako basa rekutambira kana webhu yekutambira sezvatakataridza mune yekutanga chinyorwa uye chikuva che chitoro chako chepamhepo chakamiswa, rinotevera danho chengetedza iyo webhu kukodzera. Pasina kupokana, kunyangwe iwe uchipa sevhisi kana kana iwe uchitengesa zvigadzirwa muchitoro chepamhepo, zvinodikanwa kuti utarisire webhusaiti. Vamwe vanhu, pachangu, vanotiza mapeji ewebhu asina kuchena nekuti zvinopa kusanzwisisika. Iyo e-commerce yakafanana nekupinda muchitoro chine tsvina, chisina kuchena kana nechitarisiko chakaipa, zvirokwazvo hauzodi kutenga kana kudzoka ...
Paunenge uchimisikidza webhusaiti, iyo dhizaini kazhinji chengetedza chero diki diki, senge madingindira ewebhu kana iwo mavara zvinoenderana niche yacho, sezvinoita zvitoro zvinooneka. Paunopinda panowanzo kuve netembiricha inonakidza, pamwe mimhanzi yepashure yekuita kuti unzwe wakasununguka, muchidimbu, mamiriro ekunze anokukurudzira kuti utenge zvimwe. Ivo vanowanzoisa kuisa zvigadzirwa zvinoenderana nemutengo wavo pane imwe nhanho pakumasherufu kuitira kuti ivo vave vekutanga iwe vaunoona uye vanowanikwa zvakanyanya, "vachimanikidza" iwe neimwe nzira kutora avo vanosiya iyo yakawanda purofiti kune varidzi vezvitoro.
1 Nhanganyaya kuWordPress
2 Chii chinonzi CMS?
3 CMS yakawanda sei?
Zvakanaka, webhusaiti yedu, sezvatagara tichitaura mune zvakapfuura zvinyorwa, iri WordPress, CMS iyo mundima inotevera tinotaurira izvo zvinoreva. Haisi yega chikuva chiripo, sezvatichaona muchikamu chekupedzisira pane dzimwe nzira dzandicha tsanangura kuitira kuti iwe ugone kusarudza yako yakanakisa sarudzo. Kwandiri, WordPress yewebhu webhusaiti (kunyanya kune mablog) ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kune vakawanda, ndosaka tichitsaurira chikamu ichi kunyanya kwachiri. Muchokwadi, ndiyo yakawanda kwazvo chikuva pawebhu.
WordPress iri yemahara uye yakavhurwa sosiNaizvozvo, inopa akawanda mabhenefiti asina dzimwe nzira. Iyo WordPress Foundation ndiyo irikuseri kwekusimudzira nekusimudzira chirongwa ichi. Unogona kuwana WordPress.org kuti uwane rumwe ruzivo. Iyo sisitimu iri multiplatform, saka inogona kushanda pasi pechero inoshanda system. Yakanga yakanyorwa ichishandisa mutauro wePHP nemugadziri wayo mukuru Matt Mullenweg, uye inogoverwa pasi peGPL rezinesi.
Kubudirira kweWordPress ine mavambo ayo kupfuura kwekuti ndeye mahara uye mahara, sezvo imwe yesimba iripo ndeyekuti kune vazhinji vagadziri uye vanogadzira vasingamire kugadzira zvinowedzerwa kana mapulagi ekuwedzera mashandiro matsva papuratifomu, kuitira kuti webhusaiti yako ifare nezvose zvakafanira uye zvimwe. Uye zvakare, mupepeti waro uye control panel zviri nyore uye zvine simba. Zvakanyanya, zvekuti ingangoita kota yemasaiti aripo paInternet anoshandisa chikuva ichi, zvichisiya 75% yasara ichigovaniswa pakati pemakwikwi nevakasara pawebhu vagadziri. Kune izvi zvese, WP yakahwina mibairo yakati wandei ichiziva hunhu hwayo. Nekudaro, haina rusununguko rwekushoropodzwa uye kusagadzikana, ehe izvi zviri kugadziriswa nekugara uchigadziriswa ...
Kuve wakakurumbira unogona kuwana huwandu hwakawanda hwedzidziso uye kubatsira kukupa rutsigiro kana chimwe chinhu chikaitika, chimwe chinhu chakakosha kwazvo pakusarudza chikuva. Muenzaniso wavo ndewekuti, kana iwe wakatevera zvimwe zvinyorwa zviviri zvinotaurwa mundima yekutanga uye iwe uchitoziva SiteGound, ikozvino vanopa Tricks kuve neiyo Ultra-inokurumidza WordPress webhusaiti, UN yemahara e-bhuku kukurumidza WordPress iyo iwe yaunogona kurodha mahara. Iyo webhu inomiririra masevhisi saiti yakazvipira kune emahara mapurojekiti uye ndosaka yakagadzira iri gwaro nemazhinji emapoka kuita yedu webhusaiti mvura uye kwete kuora moyo kwevatengi kana vashandisi.
Chii chinonzi CMS?
Zvakanaka a CMS (Zvemukati Management Sisitimu) iri zvemukati manejimendi manejimendi, ndiko kuti, software iyo inobvumidza iwe kuti ugadzire uye utungamire chimiro chekutsigira kana chimiro chekuve nezviri mukati pamapeji ewebhu Kubva pane huru interface yeCMS iwe unogona kubata zvese zviri mukati, senge zviripo dhatabhesi, dhizaini, uye kumwe kumisikidzwa kwewebhusaiti ndeyayo. Kune zvakare mamwe marudzi akati wandei, anoitirwa vanhu kana imwe nhaurwa, senge Wikis, blogger, maforamu, MOOCs, e-commerce, nezvimwe.
Asi iyo CMS inofanirwa kuenda kupfuura iyo webhu chikuva icho vashandisi ivo vanogona kuona, iwe unodawo kuve nekuwedzeredzwa kana maturusi emamwe marudzi ehutongi, senge iwo evashandisi vanoshandisa chikuva chako (vapepeti, maneja, nezvimwewo), uye unofanirwa kuzviita nenzira yekuti zvive nyore tsvaga uye gadzirisa mushandisi maakaunzi. Uye zvinopera pasina kutaura kuti nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza, iwe unofanirwa zvakare kushandisa masystem ekuchengetedza kuti uite nguva nenguva mabhakuki kuitira kuti usarasikirwe kana nekadiki data.
CMS yakawanda sei?
Sezvandambotaura, kunyangwe WordPress iri rakakurumbira pane maCMS anowanikwa, haisiriyo yega. Kune mamwe akawanda maCMS masystem uye iwe ungatove unofarira kuve uine akati wandei kune ako webhu fomati. Iwo marogo anowanikwa mumufananidzo muchikamu chino ndeemamwe akanyanya masisitimu manejimendi manejimendi aripo nhasi. Zvakanaka, izvo zvakakosha zvakanyanya kunze kweWordPress izvo zvatatotaura nezvazvo ndezvi:
Joomla!: inonyanya kutaridzirwa kune masuo uye zvakare yemahara.
Drupal: Iyo zvakare yemahara, iyo imwe CMS yakanangidzirwa kumatokisi akaita saJoomla!. Asi inogona kushandiswa kune zvimwe zvinangwa, nekuti inoshanduka kwazvo nekuda kwayo modular system (maforamu, ongororo, maberere, ...).
Prestashop: Zvakanaka, iyi CMS, sekutaurwa kwezita rayo, yakanyanya kutungamira ecommerce. Naizvozvo iri sarudzo yakanaka yekumisikidza chitoro chako chepamhepo. Zviratidzo zvacho zvinosanganisira manejimendi-ezvitoro manejimendi, kukwidziridzwa, mishumo yekutengesa, kuongorora, nezvimwe.
MediaWiki: iri yemahara uye yemahara, inozivikanwa kwazvo uye yakanangana nekugadzira masayiti ewikis ane zvinyorwa, dzidziso kana chero mhando yeruzivo. Kuti uwane pfungwa yekushanda kwayo, Wikipedia inoshandisa ino sisitimu.
Magento: chikuva chakagadzirwa neMagento Inc (yaimbove Varien Inc), rezinesi racho harisi GPL senge rapfuura iwo. Inotarisawo pakutengesa zvemagetsi senge Prestashop, nekudaro ichave nematurusi ekugadzirisa zvigadzirwa, manejimendi ezvitoro, mitengo, mavoti, manhamba, nezvimwe.
OwnCloud: Takataura zvakawanda muLxA nezve iyi yemahara chirongwa, sezvo zita rayo rinoratidza kuti rinotibvumidza kuve neyedu yekuchengetedza system mugore. Izvi mumba zvinogona kureva yakapusa NAS sisitimu yekuwana zvirimo kubva chero kwatinoda, asi lelvado kune ine simba yekutambira inogona kuve huru kurodha kana kuchengetedza saiti ...
Moodle: Iyo ipuratifomu yakanaka yekumisikidza saiti yeMoOC (Massive Online Open Courses), ndiko kuti, ichakubvumidza iwe kuti uve neakakura chaiwo dzidzo chikuva. E-kudzidza kuri mumafashoni uye neiyi yemahara CMS unogona kumisikidza yako wega online "academy" nezvose zvaunoda pakudzidza.
Blogger: Ndiyo imwe nzira yeGoogle kuWordPress, asi nokutendeseka uye mumaonero angu mushure mekushanda nemaitiro ese ari maviri, mukana wega weBlogger pamusoro peWordPress ndiko kureruka, kumira kwakanaka sechigadzirwa cheGoogle uye kusangana kweGoogle Adsense kuita mari saiti kunyangwe hauna yako yekutambira, chimwe chinhu chausingakwanise neWordPress kunze kwekunge iwe uine yako yekutambira.
Coppermine: Ichowo chirongwa chemahara, mune ino kesi chakanangana nemultimedia multimedia. Iyo inokutendera iwe nyore kubata uye kumisikidza yako wega foto gallery.
phpBB: kana izvo zvaunoda iri foramu, unogona kuenda kune ino yemahara chirongwa. Iwe une sarudzo dzekuwedzera ekuwedzera uye maMODs ekuwedzera mashandiro matsva uye dhizaini kune yedu foramu.
Kunyangwe izvi zviri izvo zvakakosha, pane zvimwe zvakawanda, asi neizvi une izvo zvakakosha zvaunoda kupfuura zvakafukidzwa. Imwe sarudzo ndeye gadzira iyo peji rewebhu kubva pakutanga kana enda kune programmer / dhizaina anokugadzira iyo iwe. Ive nekuchenjerera nekuti vamwe vagadziri vanoshandisa iyi mhando yepuratifomu sechigadziko uyezve ivo vanowanzo kuchaja benzi sekunge kuti vakariita kubva pakutanga apo zvese zvavakaita kumwe kugadzirisa uye dhizaini dhizaini!
Usakanganwa kusiya zvaunotaura, kusahadzika kana mazano, ivo vanogara vachigamuchirwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yakajeka gwara rekumhanyisa rako reWordPress peji
Musoro wechinyorwa ndiDefinitive Nongedzo Yekumhanyisa Yako WordPress Peji.
Ini ndakakuona uchinyora mamwe masendimita, asi hauna kuona chero kumhanyisa.
Iko kune iko kurodha pasi kwekuburitsa kwemutungamiriri
chinyorwa chinotsanangura "yakajeka-gwara-mhanyisa-peji-izwi", asi ivo havatsanangure chero cheizvozvo ...
Zvinoshamisa ... Musoro wenyaya yacho haunei nezvaunonyora ...
Ndatenda…. Ndiri kuona chinongedzo!
Dambudziko rakaonekwa muUbuntu 16.04 Kernel